Fanitarana zotram-pitanterana :: Hanomboka hitatitra any Antsiranana sy Antsirabe ny kaoperativa Cotisse • AoRaha
Fanitarana zotram-pitanterana Hanomboka hitatitra any Antsiranana sy Antsirabe ny kaoperativa Cotisse
Hanitatra ny zotram-pitaterany any Antsiranana sy Antsirabe ny kaoperativa Cotisse amin’ity taona ity, araka ny nambaran-dRakotoarisoa Alain, nandritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona nataon’ireo mpamily taksy ao amin’izy ireo, omaly.
“Hisokatra amin’ny volana avrily ny Cotisse mankany Antsiranana miainga avy eto Ambodivona ka ny Anjara Trans no miara-miasa amintsika amin’izany. Toy izany ihany koa, amin’ny volana aogositra no hosokafana ny Cotisse mankany Antsirabe, izay hiarahana miasa amin’ny kaoperativa Sotrate”, hoy Rakotoarisoa Alain, filoha tale jeneralin’ny kaoperativa Cotisse.
“Maromaro ny ezaka hataontsika amin’ity taona ity. Mila misikim-ponitra isika hanatanterahana izany. Mila hampitomboina sy hampifanakaikezina ny serasera eo aminareo taksy sy izahay amin’ireo soson-kevitra fanatsarana ny asantsika”, hoy hatrany izy.
Isan’ireo zava-baovao ihany koa ho an’ity kaoperativa eny Ambodivona ity ny fanokafana ny foiben-toeran’ ny Cotisse ao Fianarantsoa eny amin’ny Gara. “Ankoatra ny birao dia hisy ihany koa trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana eny an-toerana”, hoy hatrany izy.
Isan’ny mampiavaka an’io kaoperativa io ny fiantohana an’ireo mpanjifany miainga avy any amin’ny toerana hiaingana hatreny amin’ny toeram-piantsonana hatramin’ny fahatongavana any an-trano. “Hiezaka izahay ny hanatsara ny tolotra ho an’ireo mpanjifa. Tombony ho anay ny fahafahana mifehy an’ireo mpangalatra satria fantatra avokoa ireo taksy mitondra an’ireo mpandeha ka rehefa misy ny entana adino dia hita hatrany izany”, hoy
i Hery Léonard, filohan’ny fikambanan’ireo taksy ao amin’ny Cotisse.
Fiparitahan’ny valanarerina :: Narovana amin’ny kitrotro ireo mpiasan’ny oniversite